कांग्रेस सुधारका लागि बन्यो गज्जबको योजनाः कांग्रेसजनमा खुसियाली ! – " सुलभ खबर "
कांग्रेस सुधारका लागि बन्यो गज्जबको योजनाः कांग्रेसजनमा खुसियाली !
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको जिम्मा रहने भएको छ । गत वर्ष मसिर २९ देखि पुष ९ गतेसम्म जारी कांग्रेसको महासमिति बैठकले विधान नै संशोधन गरी निर्वाचन समितिलाई स्थायी संयन्त्रका रुपमा स्थापित गरेको छ।
यसअघि महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा मात्र गठन हुने र महधिवेशन सकिएपछि स्वत विघटन हुने गरेको थियो ।
अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्वाचन समितिको संयोजक बनेका छन् । निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि थालिसकेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, र संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा यही समितिले अन्तरिम संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।
अन्तरिम संरचना निर्माणको काम सकेलगत्तै समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनको मिति तोक्न आग्रह गरे महाधिवेशन तालिका आफै बनाउने छ।
अहिले समायोजन भएर बनेका समितिलाई नै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्देशिकाले अन्तरिम संरचना मानेको छ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेपछि यीनै अन्तरिम संचनाले अधिवेशन आयोजक समितिका रुपमा निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशनको प्रक्रियामा सघाउने छन्।
कांग्रेसको विधान–२०१७ ले यस अघि आफैंले क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण गर्ने र ती सद्यबाट आफै निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यो लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट भएका टिप्पणी र पार्टीभित्रको बहसमा स्वीकार भएपछि सदस्यता वितरण र निर्वाचित हुने व्यक्तिलाई छुट्याउने गरी विधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो।
विधानको यो व्यवस्थाको अभ्याससँगै नेपाली कांग्रेसमा अव आफै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, सम्भावित बलियो उम्मेदवारलाई सदस्यतामै बञ्चित गरेर प्रतिनिधि हुन रोक्ने, स्थानीय तहको नेतृत्वले नईच्छाएको व्यक्तिलाई प्रारम्भमै सिध्याउने तथा सदस्यता बितरक नै सँधै बलियो हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ। यो व्यवस्थाले जसरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष मानिन्छ, त्यसरी नै निर्वाचन समितिले काम गर्ने छ।
यो प्रक्रियासँगै नेपाली कांग्रेसमा सदस्यता वितरण गर्ने, राजनीतिमा क्रियाशील नभएका घरपरिवारका सबैलाई सदस्यता बाँडेर आफू बलियो हुने तथा क्रियाशील भएका प्रतिस्पर्धीलाई सदस्यता नै नदिएर प्रक्रियामै बञ्चित गर्ने राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा निर्वाचन समितिको छ।